Sidee Si aad u Ku raaxayso Season Holland Tulip | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sidee Si aad u Ku raaxayso Season Holland Tulip
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 27/12/2019)
Si aad u dareemaan Season Holland Tulip by Tareen runta ah waa waajib kasta oo isku tixgalinaya xagaaga socotada calendar. Muddo bil ah ama si sanad kasta, beeraha ku gobolka of Flevoland waxaa loo beddelaa badda qurux badan oo ballaadhan oo ubax midabo badan leh 7 million blooms. From the Hague iyo Leiden ee koonfurta, ilaa Alkmaar ee xagga woqooyi waa meesha aad la kulmi doonaa muuqashadan qurux badan. Iyadoo mid ka mid ah sida caadiga ah la wadaajiyo safraya ee dhulka reer Holland by baaskiil, yar ee adventurous fog dheeraad ah rafcaanka si ay u dareemaan ammaan xilli ciyaareedkan Tulip oo dhan waa tareen! Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah tilmaamaha ugu sarreeya ee aad ku raaxeysan karto xilliga xasaasiga ah ee Holland xilliga safarka tareenka.
Qorsheyso in aad Booqo ee Xilliga soo socda ee Holland Tulip
xilli Tulip waddaa ka dhamaadka March ilaa bartamihii bishii May, laakiin waqtiga ugu fiican in la arko tulips ee ubaxyada buuxa waa kalabadh April. Waxaad u baahan doontaa inaad hubi cimilada xilli oo aad sameyso cilmi-baarista ka hor tayaasha si loo hubiyo in aad hesho waqtiga ugu fiican.
Hanover si The Hague Tareenadu
Hamburg si The Hague Tareenadu
Cologne si The Hague Tareenadu
Waqtiga ugu Fiican ee lagu booqdo Jardiinooyinka iyo Daaqa inta lagu gudajiro Xilliga Tulip ee Holland
xilli Holland Tulip soo jiidata badan oo dalxiisayaasha iyo dadka soo booqda iyo jeer ugu fiican in ay soo booqdaan jardiinooyin iyo beeraha Tulip inta badan waa marka ay la furo iyo saacado yar ka hor ay la xiro. U qorshee safarkaaga sida si ugu soo baxay aad ka dhigi our waayo-aragnimo oo ka heli kartaa qaar ka mid ah sawirada weyn oo aan dadkii badnaa.
Cologne si Tareenadu Maastricht
Berlin si Tareenadu Maastricht
Jartaan tikidhka Your Inta aadan Tag
Sabab u tahay tirada dadka soo socda si aad u aragto tulips ah, kulma xilli Tulip Holland tareen noqon kartaa halkii ay mashquul. waa muhiim ah in la hor qorsheeyo iyo buugga tigidhada tareenka ka hor-gacanta meel kasta oo suurtagal ah si loo hubiyo in aad awoodo inaad ku hesho oo wuxuu ku raaxaysan aragtida cajiib ah.
Booqo Flevoland si aad uhesho Khibrad rubuc ka mid ah Xilliga Tulip ee Holland
Haddii aad raadinayso meel la tulips yar laakiin dadkii badnaa ka yar iyo wax yar ka qiimaha jaban markaas Flevoland waxaa loogu talagalay adiga. Waxaad ka qaadi kartaa Halkan ka Amsterdam tababaraan iyo haddii aad u qaadi saacadood peak ka dib markii aad u yeelan doontaa in la keeno baaskiilada on tareenka, taas oo macnaheedu yahay aad karto wareegga agagaarka beeraha Tulip ah. views The weheliyaan safarka waa cajiib iyo waxaa jira nasasho weyn fursado photo.
Munich in ay Tareenadu Utrecht
Cologne si Tareenadu Utrecht
Frankfurt inay Tareenadu Utrecht
Booqo Leiden ama Haarlem
Waxaad ka qaadi kartaa tareenka si Leiden ama Haarlem, halkaas oo aad ka heli doonaa views gaar ah oo ka mid ah oo caan ah "Ubaxa Strip" iyo inay awoodaan inay ku socdaan id ah saf oo tulips noqon doontaa marka aad waxaa soo gaaray. Kani waa fiican ee safarada maalin oo waa a dalxiis aad loo jecel yahay.
Sahaminta Holland tareen waa waayo-aragnimo cajiib ah oo xitaa ka sii badan inta lagu guda jiro xilli Tulip ah. Waxaa suurto gal ah in habeen buugga xusullada iyo tours tareenka ee wadanka oo dhan, laakiin kuwani waa wax yar ka qaalisan oo aad ka tagto waxaa laga yaabaa in waqti yar si ay u sahamiyaan beeraha Tulip ah. An urur waa furaha inta lagu jiro waqtigan ku mashquulsan marka hubi inaad ka hor ay qorshaynayaan in ay sida ugu badan uga xilli ciyaareedkan Tulip ee Holland!
Brussels si Tareenadu Haarlem
Antwerp in Tareenadu Haarlem
Berlin si Tareenadu Leiden
Paris si ay Tareenadu Leiden
Ku raaxayso safarka tareenka, iyada oo ugu kalsoonaan karo in ay meel inay jartaan tikidhka tareenka aad, Save A tareenka Hadaad ubaahantahay mid kale tigidhada tareenka Yurub, kaliya halkaan riix, aad boggayaga internetka kuna raaxee raacitaanka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fholland-tulip-season-by-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / es si / PL ama / iyo luuqado badan.
tareen safarka safarka dalxiiska travelnetherlands traveltips Tulip